Isitudiyo sasengadini, eduze nezitolo zakwaWatson - I-Airbnb
Isitudiyo sasengadini, eduze nezitolo zakwaWatson
Isitudiyo sengadi esizimele, esinokuthula esinamagceke angaphambili nangemuva, abheke enyakatho, nokungena ezingeni.
Ikhishi elincane elinama-hotplates aphathwayo kanye ne-microwave.
Igumbi lokugezela lesimanje elineshawa yokuhamba ngezinyawo nekhanda leshawa lemvula. Umshini wokuwasha nomugqa wokuwasha. I-wi-fi ne-TV yamahhala. Umbhede othokomele!
Indawo yemoto engaphandle komgwaqo kanye ne-carport.
Imizuzu emi-2 kuphela ukuya ezitolo zasendaweni (isitolo esikhulu, amathofi amabili, ikhemisi/iposi), imizuzu eyi-10 ukuya esitobhini sesitimela esiya edolobheni, imizuzu eyi-15 uhamba uye e-EPIC, imizuzu eyi-10 ushayela uye ezitolo zakwaDickson nezindawo zokudlela.
I-Watson iyindawo enokuthula, enamahlamvu futhi isitudiyo siseduze namapaki futhi ihlathi likhuphuka iMount Majura. Kepha futhi kuyimizuzu emi-2 kuphela ukuhamba ngezinyawo ukuya ezitolo zasendaweni zakwaWatson ezihlinzeka ngendawo yokudlela ephithizelayo (i-Knox), ikhefi / indawo yokudlela yasePhilippine ehlala idumile, isitolo esikhulu esincane, indawo yokuhamba, kanye nekhemisi/iposi.
Isitudiyo futhi siyimizuzu eyi-10 kuphela yokushayela uye ezitolo zakwa-Dickson ezinikezela nge-Woolworths enkulu, amakhefi ambalwa kanye nemini-Chinatown egcwele izindawo zokudlela zase-Asia.
Futhi imizuzu eyi-10 kuphela yokuhamba uye esitobhini sesitimela esilula esizokuyisa enkabeni yedolobha. Futhi imizuzu engu-15 uhamba ngezinyawo ukuya epaki yemibukiso ye-EPIC, kanye ne-Farmer's Market edume kakhulu ebanjwa njalo ngoMgqibelo ekuseni.
Ngihlala ngikhona ukukusiza ngemibuzo kodwa ngihloniphe ubumfihlo bakho.